च्याम्पियन्समा च्याम्पियनको सङ्कट उस्तै - खबरम्यागजिन
Homeखबरच्याम्पियन्समा च्याम्पियनको सङ्कट उस्तै
मिनी वर्ल्ड कप मानिने आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफीमा च्याम्पियनको सङ्कट उस्तै छ। अर्थात् डिफेण्डिङ च्याम्पियन भारतले यो प्रतिष्ठित टुर्नामेन्ट खेल्ने/नखेल्ने भन्नेबारे पछिल्ला केही दिनयता सङ्कट देखिएको छ, जुन सङ्कट अझै यथावतै छ। शीर्ष – 8 र्याङ्किङका दलहरूलाई लिएर आयोजन गरिने च्याम्पियन्स ट्रफी आउँदो 1 जूनदेखि इङ्ग्ल्याण्डमा खेलिनेछ। पछिल्लापटक पनि यो टुर्नामेण्ट इङ्ग्ल्याण्डमै खेलिएको थियो।
23 जून 2013 -को दिन इङ्ग्ल्याण्डको प्रतिष्ठित ओभल मैदानमा खेलिएको फाइनलमा आयोजक देशलाई5रनको झिनो अन्तरले पराजित गरी धोनी एण्ड कम्पनीले ट्रफी उचालेको थियो। तर अहिले परिस्थिति ठीक उल्टा बनेको छ। टुर्नामेन्टमा डिफेण्डिङ च्याम्पियन भारतले सहभागी जनाउने/नजाउने स्पष्ट हुनसकेको छैन। आईसीसीसित बीसीसीआईको हित बाझेपछि यो सङ्कट देखिएको हो। टुर्नामेन्टका लागि टीम घोषणा गर्ने मिति सकिसकेको छ। टीम घोषणा गर्ने अन्तिम मिति गत 25 अप्रेल थियो।
भारतबाहेक अन्य सहभागी सात देशले आ आफ्नो टीम घोषणा गरिसकेका छन्। दुइपटकका च्याम्पियन भारत सहभागी नबने यो प्रतिष्ठित र ठूलो टुर्नामेण्टको महत्त्व धेरै घट्ने निश्चित छ। उसैपनि शीर्ष-8 र्याङ्किङमा नपरेपछि वेस्टइण्डिज यो टुर्नामेण्टबाट उछिटिएको छ।
7 -को सम्भावना
आईसीसी र च्याम्पियन्स ट्रफीलाई लिएर भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) -ले आउँदो7मईको दिन बैठक डाकेको छ। यो बैठकमा आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफीमा टीम इण्डियाको सहभागितालाई लिएर ठोस निर्णय लिइने सम्भावना बाक्लिएको छ। बीसीसीआईका कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्नाले कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरीलाई बैठक डाक्ने आदेश दिएका छन्। कार्यवाहक अध्यक्ष खन्नाले पनि यस कुरालाई पुष्टि गरेका छन्।
उनीअनुसार आउँदो7मईअघि च्याम्पियन्स ट्रफीका लागि टीम इण्डियाको घोषणा हुनेछैन। आईसीसीले भारतको हितलाई ध्यान नदिए च्याम्पियन्स ट्रफीबाट हट्ने बीसीसीआईले चेताउनी दिइसकेको छ। यद्यपि बुधवार दुबईमा भएको आईसीसीको बैठकमा बीसीसीआई नरम बन्न बाध्य बनेपछि अन्तमा सहमतिमा आएर टुर्नामेन्टमा कोहली एण्ड कम्पनीलाई पठाउने सम्भावना पनि एकातिर देखिएको छ। बैठकमा बीसीसीआईका सबै राज्य क्रिकेट सङ्घका पदाधिकारीहरूले भाग लिने भए तापनि सुप्रिम कोर्टद्वारा नियुक्त प्रशासकहरूको समिति (सीओए) -का सदस्यहरूले भने भाग लिने छैनन्।
दुइ भारतीयबीच अहंको लड़ाइँ
सोझो हेर्दा यो झगड़ा आईसीसी र बीसीसीआईबीचको देखिए पनि यसको भित्री गुदी अर्कै छ। वास्तवमा यो दुइ भारतीयबीचको अहंको झगड़ा हो। दुइ भारतीय अर्थात् आईसीसीका वर्तमान अध्यक्ष शशाङ्क मनोहर र पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन। बोर्डका केही सदस्यहरू टीम इण्डियालाई च्याम्पियन्स ट्रफीबाट पछि हट्न लगाउने पक्षमा छैनन्। यी सदस्यहरूअनुसार बीसीसीआईका कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी र कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरीले श्रीनिवासनको एजेण्डा बोलिरहेका छन्। यी दुवैलाई श्रीनिवासनका नजीकका मानिन्छन्। चौधरीद्वयले बीसीसीआईको प्रतिनिधितूव गर्दै गत बुधवार बसिएको आईसीसीको बैठकमा भाग लिएका थिए। यी दुइले आईसीसीसित कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट बताइसकेका छन्। यद्यपि आउँदो7मईमा हुने बैठकमा बोर्डका अन्य सदस्यहरूले यी दुइ र श्रीनिवासनविरुद्ध मुख खोल्न सक्छन् के? शङ्कै छ।